Rajaonarimampianina : Nahazo tso-drano tamin’ny zafimaniry -
AccueilRaharaham-pirenenaRajaonarimampianina : Nahazo tso-drano tamin’ny zafimaniry
16/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Iray amin’ireo vakoka iraisam-pirenena mampiavaka an’i Madagasikara. Tsy maro ireo filoham-pirenena nitsidika io toerana manan-tantara izay nosokajian’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny vakoka sy ny kolontsaina ho vakoka iraisam-pirenena. Noraisin’ireo olobe sy ny mpitondra tany an-toerana tao amin’ny Lapa ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ankoatra ny fifanakalozan-kevitra momba ny ho avin’io vakoka io, dia nahazo tso-drano avy amin’ireo mpitondra ara-pomban-drazana ihany koa ny filoha , ary niaina sy nisitraka ireo fomba amam-panao Zafimaniry. Manoloana ny zava-misy amin’izao fotoana, dia tandindomin-doza ny asa tanana sy ny kolontsaina Zafimaniry. Na dia tao anatin’ny ora-mikija aza, dia nidina tany Ambohimitombo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nihaona sy nitafa tamin’ireo mponina miaina sy mivelona amin’io vakoka io.
Tamin’izany no nanambarany fa hiaro sy hanarina ny kolontsaina Zafimaniry ny fitondrana. Asa tanana sy kolontsaina izay afaka mampivoatra ny toekaren’ny mponina sy ny firenena amin’ny asa sokitra sy ny fizahan-tany. Anisan’ny olana lehibe ho an’ny mponina Zafimaniry ny fahasimban’ny tontolo iainana ka mahatonga ny ankamaroan’ny mponina mirona amin’ny fambolena fary sy mamokatra toaka gasy, ary toa izany koa ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay niteraka ihany koa fihenan’ireo mpizaha tany tonga any an-toerana liana amin’izany asa sikotra sy kolontsaina Zafimaniry izany. Taorian’ny ora iray nihaonan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpitarika ara-pomban-drazana, ary ireo tompon’andraiki-panjakana samihafa dia nanolotra drafi-panarenana momba ny asa tanana sy ny kolontsaina Zafimaniry ny filoha. Tafiditra ao anatin’izany drafitra izany ny famadihana ny fary ho « éthanol », ny famokarana angovo avy amin’ny faikan’ny fary ahafahana manodina ireo milina madinika ampiasain’ireo tanora.
Ireto farany izay omena fiofanana mikasika ny fahaiza-manao sy ny famantarana ny sarisary Zafimaniry andaniny, ary ny momba ny tari-dalana ho an’ny mpizahatany Zafimaniry ankilany. Anisan’ny efa manana sori-dalana nitondrana ireo mpizahatany ny Zafimaniry, ary tafiditra ao anatin’izany ny riandranon’i Tazonana. Io riandrano io, izay mety azo hamorakana herinaratra hatramin’ny 8 megawatt, izay tetikasa lavitr’ezaka. Nanome toromarika ny BNGRC ihany koa ny Filoha amin’ny hanetsehana ireo fitaovana amin’ny fanarenana maika ny lalana Ambositra-Ambohimitombo.